Sidee leysugu daraa waxyaabaha Amazon laga bilaabo bilowga?
Qof walba oo iibiyaha soo iibsaday waa inuu ogaadaa sida loo kala saaro alaabta on Amazon laga bilaabo maalinta koowaad ee iibinta halkaas. Si aad ugu wanaagsanaatid suuqa xorta ah ee aadka u degan, iibiyaha kasta waa inuu la qabsadaa algorithm-ga oo joogto ah (sidoo kale loo yaqaano A9). Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qawaaniin aasaasi ah oo sharci ah oo ku haboon xilliga uu ka faa'iideysanayo, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay Amazon optimization. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso sida aad uga mid noqon lahayd alaabta Amazon sida pro, adoo iska indha tiraya haddii aad hore u heshay waayo-aragnimo ah arimahan ama ma ahan. Waa hagaag, waxaynu u gudbineynaa arrinka iyadoo loo marayo talaabo sahlan oo talaabo talaabo talaabo ah.
Sidee loo Sameeyaa alaabta Amazon
Tallaabada Koowaad: Aqoonsiga Furahaaga Ku Qaadista Wanaagsan
Si aad u bartilmaameed ugu yeelatid daawadayaasha suuqa, waa inaad diyaarisaa qaybta ugu muhiimsan ee ereyada muhiimka ah ee ugu sarreeya iyo ereyada dheeraadka ah ee wax soo saarka ee khuseeya sheygaaga ama qaybtaada. Waxyaabahani waa inaad u baahatid inaad raadiso kuwa leh jaangooyooyinka ugu sareeya, maaddaama natiijooyinkaaga dhabta ah ee ugu badani ay ku saleynayaan iyaga. Habka ugu fudud ee lagu fahmi karo sida leysugu daro alaabta Amazon ee ereyada saxda ah ee saxda ah ayaa soo booqda tabahaaga shakhsi ahaaneed leh Sales Central Keywords. Habkaas, waxaad heli doontaa sawir weyn oo ku saabsan liiska muhiimka ah ee ereyada bartilmaameedka ah ee aad doonayso in aad dib u nadiifiso wakhti dambe.
Tilaabada Labaad: Daqiiqo Liiska Warbixinta Ugu Dambeeya Xulashooyinka
Markaad hesho fahamka guud ee shuruudaha raadintaada koowaad iyo ujeedooyinka dukaamaysiga guud, waa waqtigii lagu nadiifin lahaa liiska muhiimka ah. Taas micnaheedu waa in aad ka fogaato dhammaan ereyada aan macquul ahayn iyo ereyada dhaadheer ee dheeraadka ah si ay u ilaaliyaan oo kaliya kuwa ku guuleysta. Halkan waa qalab muhiim ah oo adiga kugu haboon inaad haysato kubad. Isku day inaad si dhakhso ah u tijaabiso, ugu badnaan sababtoo ah waxay saameyn ku yeelatay isticmaalka nadaafadda liiska alaabada ee Amazon.
Sonar - waa qalab cilmi-baaris oo lacag la'aan ah oo si gaar ah loogu talagalay iibiyeyaasha ganacsiga. Sonar wuxuu kaa caawin karaa inaad fahamto sida laysku daro alaabta Amazon adoo taageeraya alaabtaada wax ku oolinta iyadoon la socoto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah oo aad ubaahantahay inaad. Dhammaan waxaad u baahan tahay halkan waa inaad buuxisid ereyga muhiimka ah ee bartilmaameedka - iyo si toos ah u hesho wax kasta oo loo baahan yahay si loo fuliyo dhaqanka ugu fiican, sida qiyaasta raadinta qiyaasta, tixraacyada muhiimka ah ee muhiimka ah, isticmaalka dhabta ah ee adeegsigooda dhabta ah ee dukaamada iibiya Amazon, iyo fikradaha muhiimka ah ee muhiimka ah si toos ah uga soo jiidatay iibiyeyaashii ugu fiicnaa ee halkaas joogay.
Talaabada Saddexaad: Sii Ku Wareejinta Sicirka Beddelkaaga
Marka la eego celceliska celceliska celiska ee Amazon Main Home waxaa lagu qiyaasaa 13% waa in aad heshaa qiimaha sare ee CTR ee liisaskaaga sheygaaga si markaa liiska baaritaanka alaabooyinkaaga uu bilaabo inuu koro. Waa kuwan talooyin aasaasi ah oo lagaa rabo in aad bilawdo macaamiil badan oo macaamiisha ah ee ku soo gala iibsadaha dhabta ah:
Abuur sharaxaad wax soo saar leh oo hodon leh ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah si aan macquul aheyn macaamiisha akhrinta.
Ku dar sawirro nadiif ah oo nadiif ah oo tayo sare leh, iyo sidoo kale tusmo muuqaal ah, fiidiyow iyo nooc kasta oo kale oo indhaha laga eego ee muuqaal muuqaal ah oo kaa caawin doona sharaxaada sheyga oo ka sii wanaagsan. Tilmaam: Fikrad ahaan, waa inaad u oggolaataa ikhtiyaarka xarriiqa ah ee aad soo dejisay sawirada alaabta - marwalba way iska bixisaa, hubaal.
Si cad u sharraxaaya waxyaabaha aad ka dhigeyso mid aan caadi ahayn. Hadday suurtagal tahay, samee sida ugu fiican ee aad uga mid noqon karto dib u eegida alaabada badan ee saddexaad sida aad awoodid. Ugu dambeyntii, marna ha ka xishoonin inaad qaaddo nidaam tijaabo ah oo A / B ah si aad u hubiso xulashooyinka kala duwan ee waxqabadka iyo fahamsan waxa kaaga shaqeynaya si fiican, iyo waxa laga yaabo in laga yaabo inay dib u shaqeynayaan ama ugu yaraan ku xiraan tixraaca mustaqbalka Source .